ဘူဒါပက်ခုနှစ်တွင်ရထားဖြင့်ခရီးသွား: 10 သင်သိပါရန်လိုအပ်သောအရာတို့ကို | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဘူဒါပက်ခုနှစ်တွင်ရထားဖြင့်ခရီးသွား: 10 သင်သိပါရန်လိုအပ်သောအရာတို့ကို
ဘူဒါပက် ဆက်ဆက်ဟန်ဂေရီ၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည်. ကဘူဒါပက်အတွက်ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်အများအပြားရထားရှိပါတယ်ဗဟိုအချက် Stop င်. ဘူဒါပက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားများကခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်မကြာခဏများစွာသောလူအဘို့အသစ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံနေစဉ်, ဒါကြောင့်လည်းအချိန်များတွင်နည်းနည်းအခါမျိုးတွေမှာပေါ့နိုင်ပါတယ်, အထူးသဖြင့်သစ်တစ်ခုနှင့်နိုင်ငံခြားမွို့တှငျ. ငြိမ်ဝပ်သငျ့စိတျထားပါနှင့်ကြည့်ယူ 10 သငျသညျဘူဒါပက်အတွက်မီးရထားခရီးသွားလာအကြောင်းကိုသိရန်မလိုအပ်သောအရာတို့ကို.
အရှေ့: အရှေ့မှာတည်ရှိပါတယ်. ဒီအဘူဒါပက်အတွက်အဓိကနိုင်ငံတကာနှင့်အချင်းချင်းဘူတာရုံဖြစ်ပါသည်.
ခရီးသွား: လေဆိပ် Transfers
ဘူဒါပက်လေဆိပ် Terminal မှအနီးဆုံးရထားဘူတာ2Ferihegy ဖြစ်ပါသည်, ရထားဘူဒါပက်အတွက် Nguyati ဘူတာရုံနှင့်ထံမှ operating နှင့်အတူ.
သင်သည်မည်သည့်နှင့်အတူမြို့တဝိုက်ခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် ကျောပိုးအိတ်, လက်ကိုင်အိတ်သို့မဟုတ်အခြား လက်အိတ် ယင်းအပေါ်ဖြစ်ဖို့ရထားပေါ်တွင်ခရီးသွားနေချိန်မှာသင့်ရဲ့ခြေထောက်အကြားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဤသိုလှောင်ရန်သေချာစေပါ ဘေးကင်းလုံခြုံခြမ်း.
ခရီးသွားဧည့်ကြို-ငွေတွေကိုရအတွက်အများဆုံးများပါတယ် ပြည့်ကျပ်သော ထိုကဲ့သို့သောရထားဘူတာအဖြစ်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဒေသများ, အခြားအသေးခိုးမှုပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်. ဒီအဓိကစိုးရိမ်ပူပန်ဧည့်သည်တစ်ဦးအကြောင်းမရှိမဟုတ်ပါဘူးသတိထားပါရန်အကြံပြုစဉ်တွင်နှင့် တပ်လှန့်နေပါ.
ခန့်ရယူခြင်း – ဘူဒါပက်အတွက်ရထားသဖြင့်ခရီးသွား
တစ်ဘူဒါပက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောမီးရထားလိုင်းများနံပါတ်နှင့်ရထားခရီးသွားပုံစံများကိုသင်ရထားရုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတိုင်းရနိုင်ဆိုလိုတာကသူတို့ရဲ့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ဦးတည်ရာကိုရရန်အလို့ငှာ၌သင်တို့ကိုယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ကပ်ကာလများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ. သင်ဤရှာနိုင်သည် အွန်လိုင်းခရီးသွားသတင်းအချက်အလက် ဒါမှမဟုတ်ရထားဘူတာမှာ. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် လက်မှတ်များဝယ်သည် အဆိုပါဘူတာမှာ.
ရထားထဲမှာနေဖြင့်ခရီးသွားမှကိုယ်သင်နေတဲ့ဘူဒါပက်ကတ် Get ဘူဒါပက်
သငျသညျဘူဒါပက်အတွက်တစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုဖြစ်ရပြီနှင့်သင့်ဝက်ဝံရတယ်ပြီးတာနဲ့, တစ်ဘူဒါပက်ကတ်ရဖို့သေချာပါစေ. အဆိုပါကဒ်တွေဖြစ်တဲ့အချို့သို့အခမဲ့ entry ကိုအဖြစ် extras ၏နံပါတ်ကမ်းလှမ်း ပြတိုက်, အခမဲ့ ဘတ်စ်ကား/မီးရထား / လမ်းရထား / ရေခရီးသွား, နှင့်ရေခရုဇ်.
အတော်များများရှိပါတယ် စိတ်ကူးနေ့ကခရီးစဉ် ဘူဒါပက်အတွက်ရထားသဖြင့်ခရီးသွားလုပ်နေသဖြင့်ယူ. သူတို့ကအချို့သောရန်သင့်အားကြာမြင့်မည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်နေရာများ သင်ပြသ အံ့မခန်းရှုခင်း လမ်းတစ်လျှောက်. သငျသညျကိုသှားရှေ့၌သင်တို့သုတေသနလုပ်ဖို့သေချာပါစေ. သငျသညျဤမြို့၌သင်၏အချိန်ထဲကအများဆုံးရသေချာအောင်လုပ်ပါ.
ဘူဒါပက်ရှေးအကျဆုံးနှင့်အများဆုံးအချို့ရှိပါတယ် လှပသောရထားဘူတာများ ဟန်ဂေရီအတွက်. အရှေ့မီးရထားဘူတာသို့သွားရောက်ရန်သေချာစေပါ (အရှေ့မီးရထားဘူတာ) နှင့်အနောက်တိုင်းမီးရထားဘူတာ (အနောက်ဘက်မီးရထားဘူတာ) သငျတို့သဘူဒါပက်အတွက်ရထားသဖြင့်ခရီးသွားနေဖြင့်သူတို့ကိုရရှိရမည်, သငျသညျရှိပါတယ်နှင့်ဘူဒါပက်ကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသောသမိုင်းနှင့်အံ့မခန်းဗိသုကာလက်ခံစဉ်.
ဘူဒါပက်အတွက် M1 လိုင်းဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် မြေအောက်ရထားလမ်း ကမ်ဘာပျေါတှငျလိုင်း. နောက်ပိုင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်ဒါဟာခဲ့ 1894 ပင်တစ်ဦးအဖြစ်စာရင်းဖြစ်ပါတယ် ယူနက်စကို ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ. ဒါကြောင့်လည်းမရှိ အများကြီးသမိုင်း ဤမြို့၌နှင့်ရထားအသက်အရွယ်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ဆဲကြ ထိထိရောက်ရောက် run.
ဘူဒါပက်ကယ့်ကိုအားလုံးမနှင့်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လူကြိုက်များခရီးသွားဧည့် ခရီးလမ်းဆုံး. ဒေသခံတွေကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်နှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတစ်ပုံစံအဖြစ်ရထား၏အသုံးပြုမှုကိုလုပ်မပေးအဘယ်ကြောင့်? သငျသညျစိတျပကျြမညျမဟုတျ!
တစ်ဦးကရထားလက်မှတ် booking ဥရောပခရီးသွားဘို့အတွက်? အဘယ်ကြောင့်မယူ3သင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းများအတွက်စျေးအသက်သာဆုံးလက်မှတ်တွေကိုရှာဖွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်မိနစ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖို့ Login တစ်ဦးကရထားဘ်ဆိုဒ်ကို Save ယခု. လက်မှတ်တွေမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာအဘို့အပေးဆောင်နိုင်, တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်လွယ်ကူအောင်အရာအားလုံးကို.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F10-things-know-travel-by-train-in-budapest%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#bucapest #traveleurope ရထားခရီးသွား traveltips